I-LaBeouf, iRönkkö, kunye ne-Turner bayazithatha azizukusahlula kufakwa eNtshona - Inkcubeko Yopopu
I-LaBeouf, iRönkkö, kunye ne-Turner bayazithatha azizukusahlula kufakwa eNtshona
Ividiyo ngeendaba ezintsokothileyo
Ngaphezulu nje kweveki emva kweMyuziyam yaseNew York yoMfanekiso oShukumayo uvale umsebenzi weShia LaBeouf,I-HEWILLNOTDIVIDE.US, kubonakala ngathi ufakelo lufumene ubomi obutsha. Ngokwengxelo ekhutshwe ngoMgqibelo nguLaBeouf ecaleni kwabasebenza kunye noRönkkö noTurner, umsebenzi ubhekisa kwi-El Rey Theatre e-Albuquerque, eNew Mexico.
Abathathu bakhuphe ingxelo edibeneyo, ngewebhusayithi kaLaBeouf :
NgoFebruwari 10, 2017, iMyuziyam yoMfanekiso oHambayo ishiywe I-HEWILLNOTDIVIDE.US . Ukungabikho kokuzibophelela kwiprojekthi kuyingozi.
Zisuka nje, iziko lolondolozo lwembali lasilela ukulungisa iingxaki zethu malunga nokulahlekiswa kwesiqwengana sethu njenge rally yezopolitiko, endaweni yokuba umsebenzi wobugcisa uthabathe inxaxheba ekuchaseni ukwahlulwa okuqhelekileyo.
Ngapha koko, le myuziyam ibonakalise ukungabikho komgwebo okumangalisayo-kunye nembeko kuthi njengamagcisa-ngokungakhathaleli kuthi xa besenza indibano yezopolitiko kwindawo yethu yobugcisa ngoJanuwari 29, 2017.
malcolm embindini owaphula ithiyori embi
Kumatyeli aliqela, sivakalise inkxalabo enkulu kwiziko lolondolozo lwembali malunga nentetho yentiyo eyenzeka kwindawo yeprojekthi yethu, kwaye sacela ukuba iziko lolondolozo lwembali lenze okuthembekileyo ngokumodareyitha oku nokubonelela uluntu ngeendlela zokuxela ezo ziganeko. Izicelo zethu azange zamkelwe, kungasathathelwa ngqalelo kuzo.
Nangona kunjalo, khange zibekho izehlo zobundlobongela ngokwasemzimbeni kwisiza seprojekthi yethu esaziyo, kwaye nokuba besingaziswanga ngalo naliphi na inqanaba ngumyuziyam.
Kukuqonda kwethu ukuba iziko lolondolozo lwembali laqubuda kuxinzelelo lwezopolitiko ekupheliseni ukuzibandakanya kwabo neprojekthi yethu. Saxelelwa kuphela ngokuthinjwa kwamaziko olondolozo lwembali nge-imeyile evela kwigqwetha labo, uBrendan O'Rourke — igqwetha eliqaphelayo ukuba limele nomongameli wangoku.
ujongeka njengesidenge neebhlukhwe zakho phantsi
Kucacile ke ngoko ukuba iMyuziyam yoMfanekiso oShukumayo ayifanelekanga ukuba ithethe ngenjongo yethu njengamagcisa.
Ukusukela nge-18 kaFebruwari 2017, siyazingca ngokuqhubeka kwethu I-HEWILLNOTDIVIDE.US e-El Rey Theatre, Albuquerque.
Ushicilelo olusekwe kwi-NYCI-HEWILLNOTDIVIDE.USyayiphantsi kotshintsho olukhawulezileyo kunye nokusongelwa rhoqo kwiimpembelelo zangaphandle. Imyuziyam kunye ne-NYPD bathembisa ukukhusela umboniso we-livestream emva kokubuyela umva kwindawo evela kubaxhasi bakaDonald Trump kunye neo-Nazi, kodwa ukungqubana phakathi kwabagxeki beLaBeoufand kukhokelele ekubanjweni komdlali weqonga ngasekupheleni kukaJanuwari.
Ngenxa yokukhathazeka malunga nokuqhankqalaza kwaba yindawo yokuzala ubundlobongela, iMyuziyam yoMfanekiso oHambayo ikhethe ukurhoxisa inkxaso yoqhankqalazo. Ukuchaza isigqibo sabo, umyuziyam utheI-HEWILLNOTDIVIDE.USibiba 'yingozi enkulu eqhubekayo yokhuseleko loluntu,' ngaphandle kwamabango aphikisana nabadali kunye nabaxhasi babo.
U-LaBeouf uchaze ukukhathazeka kwakhe kokuqala kwisigqibo ngomfanekiso olula kwiakhawunti yakhe ye-Twitter:
#AKUKHO KUQHELEKILEYO pic.twitter.com/I-NMarcz85NB
-UShia LaBeouf(@kwizinto) NgoFebruwari 10, 2017
Inkqubo ye-intsebenzo yokuthatha inxaxheba, aphoabantu bayamenywa ukuba beze kwaye bacule, 'Akasayi kusahlula!' okoko nje benqwenela, akunakulindeleka ukuba zitshintshe kwindawo entsha.Isuswe kwisiphithiphithi saseNew York City, umsinga ophilayo unokuba nethuba elingcono lokuhlala kwikhaya lawo elitsha eNew Mexico.
bagel iresiphi nayo yonke umgubo wokutya
indlela yokwenza imilo yeelekese zomqhaphu
Iresiphi ebomvu yeklasikhi ebomvu ukusuka ekuqaleni